Ho aiza ary ny Fat? | mandimby maharo
Ho aiza ary ny Fat?	Posted on 21 January 201321 January 2013 by Mandimby Maharo	“Mipetraka ho vahaolana ho an’ny firenena ny tenako androany, ary vahaolana ho an’ ny firenena rahampitso…Aza malahelo ianareo fa mijereva lavitra, ary ny ho avy no ho banjinina.” Ampahany tamin’ ny kabary nataon’ i Fat Andry Rajoelina tamin’ ny 15 janoary raha nilaza ny tsy hirotsahany ho filoha izy amin’ ny fifidianana ho avy izao io.
Voalaza, mety tsy nahy, ny tena tiana hambara tamin’ io fehezanteny io ny alahady 20 janoary teo tany Toamasina. Nandritry ny kabary fitokanana ireo zavabita manarapenitra tany Toamasina dia nanambara ity Fat ity fa “manantena ny vahoakan’ ny Toamasina izy amin’ ny 2018”. Teny izay tsy toy ny rano natsipy an-damosin-gana io fa dia tafita tsara ny hafatra ka novalian’ ireo mpanatrika fa mahazo manantena azy ireo tokoa ity Fat ity amin’ ny fifidianana amin’ ny 2018 na tsy hilatsaka aza izy amin’ity taona ity. Lasa naka endrika fampielezan-kevitra 5taona mialoha noho izany ity fihaonana tamin’ ny mponina tao amin’ ny renivohitry Betsimisaraka ity. Etsy andaniny koa nefa dia mamerina ireo fomba fiady tamin’ ny taona 2009 indray ny Fat. Manao ampanoaka sy mandroaka vahiny ka milaza fa hahavita tena sy hijoro hatramin’ ny farany. Toy izay efa nataony nandritra ny lanonana fifampiarahabana teny Iavoloha dia naveriny indray ny ady varotra amin’ny orinasa Ambatovy mba hampiakarana ny vola ho an’ ny fanjakana malagasy hihoatra ny 1% isay voalaza ao amin’ ny Lalana mifehy ireo Fitrandrahana Lehibe, Loi sur les Grandes Mines (LIGM). teo koa ny filazana fa fitaovana toy ny fako no nomen’ity orinasa ity ho fampitaovana ny lapa vaovao ny tananan’ny Toamasina izay vao notokanany.Ny orinasa Ambatovy izay mpiray ombonantoka amin’ny tananan’ny Toamasina ka anisan’ ny nanomezany ny vola 25tapitrisa fandraisany anjara ny resaka sosialy
Natitrateriny tamin’ny fanazavana izay nentiny fa ny fitondrana teo aloha no nanao fifampiraharahana tamin’ireo mpitrandraka vy ireo. Tsy voalazany nefa fe ilay fahazoandalana hitrandraka laharana 459E dia izao tetezamita izao ny nanome izany ho an’ity orinasa ity. Raha ny fanazavana nomen’ ny mpitantana ny orinasa aloha dia nanaraka ny lalana izy ireo ka rariny raha nahazo izany. Mahagaga ny rehetra ihany noho izany izoo fihetsika manakihana mivantana an’ Ambatovy izao. ity orinasa ity izay raha ny fahafantarana azy hatrizay dia tsy manome fitaovana ratsy ireo mpiara miasa aminy.dia Sanatria ve dia ho fandrehetana afo toy ny nanjo ilay orinasa mpamboly katsaka tamin’ny 2009 indray izao paika izao? Paika sy kajy ihany manko raha ny fahitana azy. Tsy hiteraka fitonina mihintsy manko ny fanentanana ny olona hanohitra ny fisin’ny orinasa iray. Fitonina izay ilaina raha mihevitra ny hanao fifidianana isika amin’ity taona ity.
Aleo andrasana izay ho famalin’ ny orinasa volaza na hanaiky izao JADONA izao izy ireo na hangoron’ entana.Ny fitetezam-paritra sy fitokanana zava-bita koa efa mandeha isan-kerinandro manomboka izao.
Tags: 2018, Ambatovy, Andry Rajoelina, politique, ToamasinaCategories: politique, Uncategorized